केहि पनि कसरी लेख्ने? केहि पनि छैन, यसको मतलब के हो? Tdk - How Writing.Info
केहि लेख्ने छैन
शून्यता, हिज्जे सही
केही पनि छैन
तपाईं यो हिज्जे गल्तीको बारेमा जानकारी मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, तर कसरी info.info को वेब ठेगानालाई तपाईंको बुकमार्कमा बदल्ने र स्रोत साइटमा कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर पनि। जब तपाईं चाहनुहुन्छ, तपाईं मोबाइल फोन वा कम्प्युटर मार्फत हाम्रो वेबसाइट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र दिमागमा रहेका शब्दहरूको सही हिज्जे नियमहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले विवादास्पद शब्द हिज्जे नियमहरूको बारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न शीर्षक अन्तर्गत टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंको नमूना सही हिज्जे वाक्यहरू लेख्नुहोस्।
केहि मतलब छैन?
केहि पनि कसरी लेख्ने?
केहि पनि छैन, हिज्जे गाईड
प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहोस्